Tag: foomamka | Martech Zone
Soo Baxid: Kordhi Mawduucaaga Suuqgeynta 'ROI' oo leh Mawduuc Is-dhexgal ah
Mar uu dhawaan lahadlay Marcus Sheridan, wuxuu kahadlay tabta ay ganacsatadu uga maqanyihiin calaamadda markay horumarinayaan dadaalkooda suuq geynta dijitaalka ah. Waxaad ka dhagaysan kartaa qaybta oo dhan halkan: Mid ka mid ah furaha uu la hadlay iyada oo macaamiisha iyo ganacsatadu ay sii wadaan inay si toos ah u toosiyaan safarada macaamiishoodu waa mawduuc is-dhexgal ah. Marcus wuxuu xusay seddex nooc oo ah waxyaabo is-dhexgal ah oo awood u siinaya is-hagida: Is-qorsheyn - awood u leh rajada in la dejiyo a
Adeegsiga foomamka WordPress iyo cuf-isjiidadka si loo soo qabto hoggaaminta
Sabtida, Oktoobar 24, 2020 Sabtida, Oktoobar 24, 2020 Douglas Karr
U adeegsiga WordPress sida nidaamka maareynta maadadaadu waa wax iska caadi ah maalmahan. Qaar badan oo ka mid ah bogaggan ayaa qurux badan laakiin waxay la'yihiin istiraatiijiyad kasta oo lagu qabsado hoggaamiyeyaasha suuq geynta. Shirkaduhu waxay daabacaan wargeysyada, daraasadaha kiisaska, waxayna u adeegsadaan kiisaska si faahfaahsan iyaga oo aan weligood qabsanin macluumaadka lagala xiriirayo dadka soo dejiya. Sameynta degel websaydha la soo dejin karo oo lagu heli karo foomamka diiwaangelinta ayaa ah istaraatiijiyad suuq geyn wanaagsan. Adoo qabanaya macluumaadka xiriirka ama
Sharpspring: Waa Iibayn Dhamaystiran oo La-Qiimeyn Karo iyo Suuqgeynta Qalabaynta Suuqgeynta
Talaado, September 22, 2020 Talaado, September 22, 2020 Douglas Karr
SharpSpring wuxuu isku darayaa otomaatiga suuq geynta iyo CRM hal xalka dhamaadka-dhamaadka ah ee loogu talagalay inuu kobciyo ganacsigaaga. Mashruucooda hodanka ku ah muuqaalka waxay leeyihiin wax kasta oo aad u baahan tahay iyo inbadan oo ku saabsan iibka gudaha & suuq-geynta suuqgeynta: emaylka ku saleysan habdhaqanka, raad raaca ololaha, bogagga degitaanka ee firfircoon, dhisaha baloogga, jadwalka warbaahinta bulshada, sheekooyinka caqliga leh, CRM & otomatiga iibka, qaab dhismeedka firfircoon, soo warbixinta iyo falanqaynta, Aqoonsiga Booqdaha oo aan la garanayn, iyo inbadan. Barxadda waxaa adeegsanaya SMBs iyo shirkadaha Enterprise, laakiin macaamiisha ra'iisul-wasaaraha SharpSpring waa dijitaal
Fieldboom: Foomamka Casriga ah, Daraasadaha, iyo Kediska
Arbacada, Janaayo 31, 2018 Douglas Karr
Suuqa dalabyada foomku aad buu mashquul u yahay. Waxaa jiray shirkado hareeraha ka jira oo gacanta ku haya horumarinta foomka muddo ka badan toban sano oo shabakadda ah, laakiin tiknoolajiyada cusubi badanaa waxay leeyihiin waayo-aragnimo aad u sarreeya, adeegsiyo macquul ah, iyo tan isku-dhafan. Waa wax fiican inaan arko arimahan oo aad u horumarsan. Hal hogaamiye meesha ka maqan waa Fieldboom, oo astaamaheeda ay ka mid yihiin: Tuubbada Jawaabta - Ku dar jawaabta su'aal hore iyada oo qayb ka ah su'aasha cusub
Zymplify: Suuqgeynta Adeeg ahaan Ganacsi Yaryar
Khamiista, Sebtember 14, 2017 Khamiista, Sebtember 14, 2017 Douglas Karr
Horumarka degdega ah, qaabdhismeedka, iyo isdhexgalka ayaa sii wadaya inay dhigaan meherado suuqa ku yaal oo bixiya waxyaabo fara badan oo leh qiimo aad u hooseeya sannad kasta. Zymplify waa mid ka mid ah barnaamijyadaas - madal suuq geyn daruur ah oo bixisa dhammaan astaamaha lagama maarmaanka u ah meherad yar si ay u soo jiitaan, u bartaan, ugana warbixiyaan tilmaamaha internetka. Si kastaba ha noqotee, waxay ku sameysaa wax ka yar inta badan aaladaha kale ee otomaatiga suuq geynta suuqa. Laga soo bilaabo goobta: Zymplify waa